Ndị na-ere ọgwụ na ọgwụ na ihe ịchọ mma - China Pharm & Cosmetic Add Manufacturers
Glycine CAS 56-40-6 maka ọkwa Pharma (USP / EP / BP)
Aha ngwaahịa ： Glycine
Ọdịdị ： White crystalline powder
Njirimara Ngwaahịa: tastetọ ụtọ, dị mfe soluble na mmiri, ntakịrị soluble na methanol na ethanol, anaghị agbasa na acetone na ether, ebe agbaze: n'etiti 232-236 ℃ (decomposition).
Mbukota ： 25kg / akpa, 25kg / drum ma ọ bụ dị ka kwa ahịa chọrọ
L-Lysine HCL CAS 657-27-2 maka ọkwa Pharma (USP)
Aha ngwaahịa ： L-Lysine HCL
Ọdịdị ： White crystals or crystalline powder
Njirimara Ngwaahịa: Ihe na-enweghị ntụpọ kristal, na-enweghị isi, na-atọ ụtọ ilu; soluble na mmiri, dịtụ soluble na ethanol na diethyl ether
Aha ngwaahịa ： L-Threonine
Njirimara Ngwaahịa: Odorless, dịtụ ụtọ, gbazee ma rekasịa n'okpuru 256 ℃, mebiri ngwa ngwa mgbe ị na-atụgharị alkali na nnukwu okpomọkụ na nwayọ mgbe ị na-ezute acids, soluble na mmiri, anaghị edozi na ethanol, ether na chloroform.
L-Isoleucine CAS 73-32-5 maka ọkwa Pharma (USP / EP)
Aha ngwaahịa ： L-Isoleucine
Njirimara Ngwaahịa: Ilu na uto, Soluble na mmiri na ntakịrị soluble na mmanya ethyl, Ebe na-agbaze: 284 ℃.
L-valine CAS 72-18-4 maka Ọgwụ Pharm (USP)
Aha ngwaahịa ： L-Valine
Njirimara Ngwaahịa: Odorless, Na-atọ ụtọ ụtọ ma na-elu ilu ma emesịa, Soluble na mmiri ma sie ike soluble na mmanya ethyl
L-Phenylalanine CAS 63-91-2 maka ọkwa Pharma (USP)
Aha ngwaahịa ： L-Phenylalanine
Ọdịdị ： ọcha na-acha ọcha ezi crystalline ntụ ntụ
Njirimara Ngwaahịa: Okpomoku di iche na obi ilu. Anọrọ n'okpuru okpomọkụ, ọkụ na ikuku
L-Methionine CAS 63-68-3 maka ọkwa Pharma (USP)
Aha ngwaahịa ： L-Methionine
Njirimara Ngwaahịa: Ubé ​​pụrụ iche, ntakịrị ihe ilu na uto. Isi na-agbaze: 280 ~ 281 ℃. Na-ejighị n'aka acids siri ike. Soluble na mmiri, ọkụ itughari ethanol, alkaline ngwọta, ma ọ bụ itughari ịnweta asịd. Ihe anaghị edozi na ethanol, nke fọrọ nke nta ka ọ ghara ịpụ na ether.
L-Leucine CAS 61-90-5 maka ọkwa Pharma (USP)
Aha ngwaahịa ： L-Leucine
Njirimara Ngwaahịa: Ire obere ilu, soluble na mmiri, obere soluble na mmanya, unyi anaghị agbasa na ether.
DL-Methionine CAS 59-51-8 maka ọkwa Pharma (USP / EP)
Aha ngwaahịa ： DL-Methionine
Ọdịdị ： ọcha crystalline ntụ ntụ
Njirimara Ngwaahịa: Ebe mgbaze nke 276-279 ℃, Na-agbaze na mmiri, O siri ike soluble na ethanol, Ihe fọrọ nke nta ka ọ ghara ịgbasa na etetol acetone.
73-32-5 L-Isoleucine, L-Valine 72-18-4, Nri oriri na-edozi ahụ, L-Threonine Pharm ọkwa, Gralọ ọgwụ Pharm L-Leucine, L-Threonine Nri Nri,